Mombamomba ny orinasa - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd. dia mpandraharaha mpiorina vy matihanina mampiditra endrika, fanamboarana ary fametrahana.
Niorina tamin'ny Jolay 2006 ilay orinasa, fantatra amin'ny anarana hoe Kunming Hongli Architectural Design Studio. Miaraka amin'ny fitomboan'ny orinasan-studio, dia nanatsara tsikelikely ny orinasany ho fananganana tranokala. Nanomboka ny taona 2015, namolavola tsikelikely ny orinasany ho lasa fananganana injeniera ary novaina ho orinasa mpamorona injeniera vy. Ny sehatry ny famolavolana, ny fanodinana ary ny fametrahana ny orinasa dia misy: trano fandraisam-bahiny, tranobe misy birao, fitehirizana mangatsiaka, zavamaniry indostrialy, villa, kianja ary rafitra fananganana hafa. Ny departemanta teknika dia voatanisa ho departemanta fototry ny orinasa hatramin'ny nananganana azy. Olona 3 farafaharatsiny (ao anatin'izany ny olona ara-dalàna) ao amin'ity departemanta ity no manana traikefa famolavolana 3-5 taona ao amin'ny institiota famolavolana ary samy manana ny fiaviany ao amin'ny institiota famoronana. Nandritra ny folo taona mahery, ny orinasa dia namolavola drafitra iray manodidina ny 800.000m2, ary nandritra ny dimy taona dia 280 000m teo ho eo ny velaran'ny fanorenana2.
Ny orinasa dia nametraka foana ny famokarana azo antoka, ny kalitaon'ny injeniera ary ny fahavitana araka ny vanim-potoana fananganana voalohany. Ny mpanjifa-voalohany no fitsipika fototry ny orinasa. Ny famoronana injeniera manara-penitra no fitaovana hampandrosoana ny tsena. Taorian'ity fotokevitra ity dia nahazo fanohanana matanjaka sy fankatoavana avy amin'ny olona manana fahitana amin'ny lafiny rehetra ny orinasa.
Hatramin'ny niorenan'ny orinasa dia niely nanerana ny faritany sy ireo firenena Azia atsimo atsinanana ny tetik'asa fananganana injeniera sy ny fanohanana ara-teknika an'ny orinasa. Raha dinihina ny fampandrosoana maharitra ny orinasa, ny fanohanana ara-teknika ary ny fananganana tetikasa, dia hanao drafitra isam-paritra midadasika kokoa izahay ary hikatsaka fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ireo firenena rehetra manamorona ny "Belt and Road" ho ivon'ny.
Ny lazan'ilay orinasa tsara, ny injeniera avo lenta ary ny serivisy avo lenta dia nahazo fiderana betsaka avy amin'ny lafim-piainana rehetra ary namolavola ny endrik'ilay orinasa tena tsara.
Fototry ny famokarana ny orinasa:
Takelaka fananganana vy sy fizarana vy fanodinana vy: Tianjin sy Yunnan, Sina
Miaraka amin'ny fitomboan'ny asa aman-draharaha, niditra an-tsokosoko tsimoramora tao anatin'ny fananganana saha i China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd. Tao anatin'ny telo taona lasa, ny tetik'asa fananganana eo an-toerana dia sahabo ho 90000 metatra toradroa, ary ny famolavolana sary sy ny famolavolana sary dia manodidina ny 260000 metatra toradroa.